पूर्व एमाले ब्यूँताउने तयारीमा ओली; उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा ! - Sidha News
पूर्व एमाले ब्यूँताउने तयारीमा ओली; उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा !
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटे राम बहादुर थापा वादललाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकार रहँदासम्म मन्त्री पद पनि नजाने र पार्टी फुट्दा ओली नेतृत्वको पार्टीमा उपाध्यक्ष समेत पाउने आश्वासन पाएपछि बादलले प्रचण्डको क्याम्प छोडेको कतिपय नेताले बताएका छन्।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा वादल गएनन् । वादल पूर्व माओवादी नेता हुन् । कुनै समय वादलले प्रचण्डको साथ छोडेर पार्टी फुटाएका थिए । पछि पुनः प्रचण्डकै पार्टीमा एकता गर्न आएर उनी गृहमन्त्री भएका हुन्।
अहिले नेकपामा वादलले प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सहभागि नभएर आफु प्रचण्डको गुटमा नरहेको संदेश दिएका छन् । उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला काठमाडौंका पूर्व एमालेहरुको भेला भएको छ।
जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राईकै संयोजनमा भएको भेलालाई उपप्रधानमन्त्री रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए।
‘पार्टीभित्रको विवादको वास्तविकता बुझ्न अनौपचारिक भेला राखिएको हो । हाम्रो उद्देश्य पार्टी विभाजनलाई बल पुर्‍याउनु होइन’, जिल्ला अध्यक्ष राईले भने । उनका अनुसार, भेलामा पार्टी संकटमा रहेकाले त्यसैअनुसार भूमिका खेल्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका थिए।
‘पार्टी विवाद चर्किरहँदा त्यसका लागि हामीले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ भनेर भेला राखिएको हो’, उनले भने । शनिबार दिउँसो भएको भेलामा पूर्व माओवादी पक्षलाई भने बोलाइएको थिएन । ‘अहिलेसम्म पूर्व भन्ने नै छ, त्यसैले एमालेलाई मात्रै बोलाइएको हो’, राईले भने।
पूर्व एमाले भेला भनिए पनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए।